Juventus oo kula dagaalameysa PSG xiddig ka tirsan kooxda Tottenham – Gool FM
(Turin) 21 Luulyo 2019. Kooxda Juventus ayaa ku soo biirtay loolanka loogu jiro heshiiska xiddiga reer England ee daafaca garabka bidix kaga ciyaara Tottenham Hotspur Danny Rose inta lagu gudi jiro suuqan xagaaga.
Wargeyska “Mirror” ee dalka England ayaa sheegay in kooxda Juventus ay si xoogan u dooneyso heshiiska Danny Rose, inkastoo ay heshiisyo kale ee muhiim ah sameysay inta lagu gudi jiro suuqan xagaaga.
Juventus ayaa heshiiska xiddigan reer England ee Danny Rose kula dagaalami doonta kooxaha Schalke, Paris St Germain iyo Newcastle United.
Danny Rose ayaa isaga haray kulamada ay kooxda Tottenham Hotspur ugu diyaar garoobeyso xili ciyaareedka cusub, si uu u xaliyo mustaqbalkiisa, kahor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga ee xagaaga.
Tottenham Hotspur ayaa isku dayaysa inay iska fasaxdo Danny Rose xagaagan, xili ay kooxda reer England dhawaan iska iibisay Kieran Trippier, kaasoo ku biiray Atletico Madrid.
Tan iyo markii uu Tottenham kaga soo biiray Leeds United 2007, Rose ayaa u ciyaaray Spurs-ka 198 kulan ee ah dhamaan tartamada kala duwan, isagoo xili ciyaareedkii lasoo dhaafay ciyaaray 37 kulan, wuxuuna muhiim ka yahay qorshaha mcalinka reer Argantina ee Mauricio Pochettino.
"Neymar kuma faraxsana kooxda Paris St Germain” - Wakiilkiisa